MediaLight Mk2 Kuisirwa Mirayiridzo - MediaLight Bias Mwenje
MediaLight Mk2 Kuisirwa Mirayiridzo
Ndokumbirawo chete muise dimmer rimwe paMediaLight kana LX1. Kana iwe uri kuwedzera iyo Wi-Fi dimmer kune yako Mk2 Flex, usashandise zvakare imwe dimmer yakauya neMk2 Flex. Hazvizoshanda nemazvo kudzamara imwe yabviswa.
Ndapota ivai munyoro.
Iyo yakachena mhangura mitsetse mune yako MediaLight Mk2 ndeye yakanakisa makondakita ekupisa nemagetsi, asi zvakare akapfava uye anogona kubvaruka nyore kwazvo.
Ndokumbira usiye makona akasununguka zvishoma uye usazvimanikidza pasi. Makona anogona kutonamira zvishoma. Izvi zvakajairika uye hapana njodzi yekuvhara. Izvo hazvikonzere chero mimvuri. Kumanikidza makona kunogona kukonzera ivo, pane imwe nguva, kubvarura.
Kana yako MediaLight yakanamatira paTV, pane mukana wakanaka kwazvo wekuti ichabvaruka kana iwe ukaedza kuibvisa. Iyo glue inoumba chisungo chakakwirira kwazvo. Izvi zvakafukidzwa pasi pewarandi.
Edu️ Deredza njodzi yekukuvara kune yako nyowani MediaLight. *
Ndokumbirawo kuti muverenge iyi yekumisikidza gwara uye tarisa ipfupi yekumisikidza vhidhiyo yemakore mazhinji ekunakidzwa.
* Ehe, kana MediaLight yako ikambotyoka panguva yekumisikidza yakafukidzwa pasi peMediaLight 5-Year Warranty.
The dzvuku madenderedzwa mumufananidzo uri pamusoro uratidze iyo FLEX POINTS kwaunogona kukotama zvakanaka tambo 90 ° mune chero nzira. Chero iyo flex point inogona kukotama munzira ipi neipi. Iko hakuna kudikanwa kwekukanda makona pasi. (Zvichienderana nehuwandu hwesimba rinoshandiswa kutsikirira makona, unogona kubvarura tambo yePCB yemhangura).
Kana iwe uchida kuita inopfuura 90 ° kutendeuka, iwe unofanirwa kuronga kutendeuka pamusoro peanoverengeka maflex point. Mune mamwe mazwi, kutendeuka kwe180 ° kunofanira kugoverwa pakati pemaviri 90 ° kutendeuka.
Iko hakuna kudikanwa kwekutenderedza makona pasi iwe paunovhura kona, asi kana iwe usingakwanise kudzivisa kukurudzira, ingorega kumanikidza zvakanyanya.
Ok, neizvozvo zviri munzira, ndapota tarisa yedu yekuisa vhidhiyo!
Une matambudziko neako dimmer remote control? Ive neshuwa yekutarisa ino inokurumidza-yakagadzirwa vhidhiyo kukuratidza maitiro ekuona chaiyo mutsara wesaiti.
Kuwedzera nitpicky ruzivo:
Kana urwu ruzivo rwakawandisa kwauri, inzwa wakasununguka kurusvetuka, asi kana uri kushamisika kuti sei takaita mamwe magadzirirwo esarudzo, iwe ungangowana iwo ruzivo pazasi.
Iyo MediaLight Mk2 inotaridzika zvakasiyana zvakanyanya kubva kune edu apfuura mamodheru. Yakagadziriswa zvachose. Tisati tapinda mukumisikidza, ini ndoda kutsanangura shanduko uye nditsanangure kuti sei takazviita.
Kutanga, iwe unozoona kuti iyo strip inoshandisa iyo zigzag pateni. Izvi zvakaitwa nekuti, pachinzvimbo cheiyuniti dzekare dzaivimba nemabhande akawanda akabatana neiyo nzira ina-nzira, isu takagadzirisa mutsetse kuti umhanye sechidimbu chimwe chakakomberedza mativi matatu kana mana, kana mune inverted-U pane kumashure kwechiratidziro.
Kusiyana neyekare MediaLight Flex, hapana hunyengeri kutenderera makona. Iyo tambo inoshandura nyore makona, ingova nechokwadi chekutsemura izvo zvisina kusimba zvinhu pamutsara. Bota chete panenge paine FLEX POINT yakanyorwa neMediaLight "M" logo kana "DC5V".
1) Iwo maMk2 mayuniti anosanganisira chete .5m (hafu yemita) yekuwedzera tambo. Izvo zvakapfupika, handiti? Takaita izvi kuti tinzwe - asi KWETE nemari.
Tiri kunyima ne Magetsi kuitira kuti tikwanise kumhanya marefu marefu nekuderera kwemagetsi kuderera pane apfuura mamodheru. Iwo echinyakare Quad mitsetse yakakamurwa kuita mana mitsetse yekuparadzira iwo magetsi kudonha zvakaenzana pakati pezvikamu zvina, asi izvi zvakakonzera kudzika kwakanyanya kupenya uye dendere rerati rematare. Iyo Mk4 yakarongedzwa kune yakanyanya kuchenesa uye nyore kuisa.
Tiri kushandisa yakachena mhangura tambo kudzikisa kuramba kumutsara, asi nekuti iyo Mk2 Flex yakagadzirirwa kumhanyisa simba re5v USB, kudzikisa hurefu hwetambo kunowedzera kupenya kwakanyanya kwetambo neinenge 15%. Yakasanganiswa netambo yekuwedzera, iyo dimmer uye switch, iwe vachiri Iva nemamita mana (4 metres) yetambo yakazara. Pasina iyo .1.2 yekuwedzera, iyo yakazara urefu hwetambo, kusanganisira switch uye dimmer ndeye 5 tsoka. Kana iwe uchida kumhanyisa simba kure kure, nzira iri nani yekuzviita ndeye 2.4v kana 110v (zvinoenderana nedunhu rako) yekuwedzera tambo.
Nguva dzose cherekedza nei tambo dzekuchaja USB dzefoni yako dzisingadarike 5m (kazhinji, ipfupi kwazvo, haina kureba kupfuura gumi tsoka / 10m). Imhaka yekuti haugone kumhanyisa USB simba kure kwazvo pasina kudonha kwemagetsi nekuda kwekushora. Kambani yemagetsi haimhanye tambo yekuwedzera ye3v kumba kwako futi. Unoda mitsetse yemagetsi kuti uwane magetsi kubva kumagetsi kubva kumba kwako.
Zvakanaka, zvakafanana zvinoshanda kune yako MediaLight Mk2.
Kana nzvimbo yako yemadziro iri mamita makumi maviri kure, unogona kumhanyisa tambo ye20v kana 110v pasina kurasikirwa nemagetsi emagetsi ako neTV. Zvikasadaro, zvakanakira simba zvakananga kubva kuTV kana kubva padhuze remagetsi riri padhuze. Iyo Eclipse ichiri kusanganisira kuwedzera kwe220ft, nekuti iyo Eclipse ipfupi zvekuti haitombo dhonza chero simba (pasi pe4mA, kana iwe uchinetseka).
Iwo matsva eMk2 machipisi anoshanda zvakanyanya (kuita kuti iwedzere, yakajeka 5v mitsetse inogoneka), asi isu tinofanirwa kudzikisa kuramba pakati peiyo USB plug uye tambo kuti uwane aya marefu.
Kana iwe uchida ma-super-akajeka maLEM, isu tinopa 12v uye 24v sarudzo (uye 800 lumen bulb), asi magetsi emagetsi kubva kuTV ndeyekureruka, kushoma wiring uye (mune zvimwe / kazhinji zviitiko) kuve nemwenje kubatidza uye kudzima. pamwe neTV. (Sony Bravia haiite izvi zvekupedzisira zvakanyatsonaka. Inodzima asi haizive pekugara uye kutendeuka uye kudzima kunge kupenga kana TV yadzima). Isu takapa gumi nemaviri mitsetse kwemakore, asi iwe haudi kana kuda mwenje wekusarudzika uve wakanyanya kupenya. Ndosaka isu tichisanganisira dimmer. Kunyangwe iine 12v USB simba, mwenje iri kupenya zvakanyanya pasina kushandisa dimmer. Iko kwakakwira magetsi anopinda mukutamba ndipo paunoda kushandisa matanda seyakareba matauriro emwenje kutenderedza kamuri.
2) Iwo matsva mitsetse anotaridzika sesirivheri, iwo haatarike kunge endarira, asi iwo ane chiwanikwa-akanyudzwa mhangura.
Yese edu ePBBIP mitsetse yakachena mhangura, asi kuwedzera hupenyu hwetambo, kudzivirira oxidation uye kugadzirisa hukama hwehukama pakati pechiso chegomo maLED uye pcb strip, ivo vakaputirwa neiyo alloy kunyudzwa.
Izvi ndizvo zvavanotaridzika vasati vanyudzwa uye kucheka uye pamberi pema LED nemaresidha asati asungirirwa pa:
Iyi RoHS-inoenderana maitiro inopfekedza mhangura ine chiwanikwa chine zinc, nickel netini. Kukwasva uku kupfeka hakusi dambudziko, ndiwo musara pakati pema LED uye tambo (pasi peiyo LED yausingakwanise kuiona) iyo inonyanya kukosha.
Iko kune kwakawedzerwa mukana weiyo alloy kunyudzwa. Iyo yakajeka-isina kwazvakarerekera ruvara kupfuura yakafumurwa mhangura. Zvisinei, ini handisi kuzonyepa. Musiyano wacho hauna basa. Izvo hazvichinje zvakabatana karavara tembiricha yakawanda - ingangoita 20K. Uchishandisa nhema pcb ine simba rakakura kwazvo pane yekupedzisira tembiricha tembiricha. Isu takaedza machena mitsetse iyo yakakonzera shanduko inosvika ku200K.
Kune dzimwe shanduko.
Isu takachinjika kubva kumachipsi mune yapfuura MediaLight Imwe Strip, Flex uye Quad mamodheru kune echinyakare Colourgrade Mk2 chip (iyo 2835 SMD ine tsika phosphor musanganiswa). Iyo CRI yakawedzerwa kubva pa95 Ra kusvika ≥ 98 Ra. Iyo TLCI yakawedzera kubva pa95 kusvika 99. Icho chiri, pachena, chiedza chakanaka.
Isu tanga tichishanda pane iyi chip kubvira pakaburitswa MediaLight Pro uye chip ichipa MediaLight Pro-chikamu chinotaridzika kusagadzikana uye yakanyanyisa kukwirira CRI / TLCI pamutengo wakaderera-pa-mita pane yedu yekutanga MediaLight vhezheni 1.
Zvakanaka, zvakakwana kutsanangura dhizaini (yazvino). Iwe unoda kuziva maitiro ekuisa ichi chinhu.
Chii chiri mubhokisi (cheiyo Mk2 Flex 2m-6m)
1) On / off toggle switch ne USB murume plug
2) MediaLight Mk2 Flex mwenje mutsetse
3) Dimmer ine infrared inogamuchira (kure kure haishande pasina kubatanidza iyo dimmer)
4) Remote kuzvidzora
5) .5m tambo yekuwedzera. Chingoishandisa kana uchichida. Kana iwe uri simba kubva kuTV USB chiteshi, pamwe haudi, uye iwe unoshandisa mashoma simba kana ukasiya icho.
6) Yakagamuchirwa AC adapta (North America chete).
7) waya yekufambisa clip. Shandisa izvi kugadzirisa wiring uye / kana kubatsira kumisikidza IR inogamuchira yeiyo dimmer. Makuru MediaLight Mk2 mayuniti anosanganisira zvimwe zvikamu.
Paunenge uchiisa iyo nyowani yeMediaLight Mk2 pachiratidziro chako, kana uri kutenderera mativi matatu kana mana, semuenzaniso, kana kuratidzwa kwako kuri pachikomo chemadziro:
1) Measure 2 inches kubva kumucheto kwechiratidziro (kana iwe usina mutongi anobatsira, iyo "MediaLight" logo rectangle pamativi ese eMk2 Flex bhokisi- kusasanganisira iyo tsvuku, girini & bhuruu "M" iri zvishoma inopfuura 2 inches inches). Bhokisi iri zvakare zvishoma zvishoma pane maviri masendimita gobvu (anenge 2 1/3 inches).
2) Kutanga kukwira padivi pechiratidziro kudivi riri padyo nechiteshi che USB, kutanga kubva pa SIMBA (chivhariso) KUGUMA kwechikamu. Kana iwe uri plugging muTV ye USB chiteshi, pamwe haufanire kushandisa iyo .5m yekuwedzera iyo yatakabatanidza. Siya iyo (kana uchikwanisa) kuitira kuiswa kwakanaka.
Izvi zvinoita kuti zvive nyore kucheka chero akareba urefu kana iwe wapedza. Kana chiratidziro chako chisina chengarava che USB, tanga kukwira kumusoro kuratidzwa kudivi riri padyo nekwaniso yesimba, kungave kuri tambo yemagetsi kana bhokisi rekunze sekuwanikwa pane zvimwe zvinoratidzwa. Kana iri pakati chaipo, handizive kuti ndikuudze chii. Flip mari. :)
Nenzira, kana iwe netsaona wakacheka magumo emagetsi, isu tinokutumira iwe kutsiva yemahara, asi isu tichave tichava nekuseka kwakanaka. Zvinoita kunge zvinowanzoitika kazhinji nevanhu vane hungwaru kumasangano akatsveneswa, saka tinofunga kuti chiratidzo chehungwaru hwakanyanya, asi zvinoitika kakati wandei pagore uye isu tichiri kuzviseka.
Magetsi ako akafukidzwa pasi peiyo indasitiri-inotungamira warandi yemakore mashanu uye isu tinofukidza mabhatani akaisirwa, saka usanetseke zvakanyanya. Kana iwe ukaita tsvina yeMediaLight Mk5, ingo taura nesu.
3) Kana iwe uchida kucheka yakawedzera kureba kubva pamutsara, iwe unogona kuicheka pamuchena mutsetse unoyambuka yega yega yekutaurirana. Cheka pamutsetse pazasi:
Izvo zvinofanirwa kufukidza zvese kune akawanda madziro akaisirwa kuiswa.
Iyi inotevera "inverted-U" mirayiridzo inoshanda kana uchishandisa 2m (kana zvishoma) tambo kune yekuratidzira pachigadziko. Mune mamwe mazwi, kana iwe usiri kuyedza kutenderera matatu mativi:
Iri gwaro rinoshanda sekureba sekuraira chaiko saizi yechiratidziro chako kubva kune yedu sizing chati.
Heino vhidhiyo yechinguvana yandakaita ndichirovera pahotera panguva yemhepo ichangobva kuitika ine chekuita nedutu (gara uchifamba nemwenje wekusarura;)). Tichaitsiva munaGunyana nechimwe chinhu chisingaperi, asi ipfupi uye inotapira. Mune ino kesi, ndeye 1m strip pane 42 inch kuratidza, asi izvi zvinoshanda kwe2m kana 3m strip pane yakakura kuratidza.
Ndinoisa sei MediaLight Mk2 kana chiratidziro changu chiri pachigadziko?
1) Tsvaga pakati penzvimbo nekuisa kutanga kwemutsara padhuze nekumucheto kwetambo uye nekutsvaga iyo midpoint. Iwe unogona zvakare kuverenga maLED. Kune makumi matatu maLED pamamita. Kana iyo tambo iri 30 metres pakureba, iwo maficha ari pakati pe 2th uye 30st LED ndiwo epakati.
2) Tsvaga pakati peTV yekumashure kwechiratidziro. Iwe unogona kutara pakati nechidimbu che masking tepi kana kutomaka nechoko kana kunyangwe, zvinyoro, nepaser penzura. Kuyera inenge 1/3 yenzira kubva kumusoro kwechiratidziro. Izvi hazvifanirwe kunge zviri chaizvo! Iyi "1/3 yenzira yepasi yekutonga" chete inoshanda kana uchishandisa tambo iri ipfupi pane matatu mativi ekuratidzira!
Kana iwe uine 3m ye65 "kuratidza, tevera yakajairwa nhungamiro ye2" kubva kumucheto kwechiratidziro kumativi ese.
Ongorora: Kana mativi echiratidziro chako akakombama, zvakanaka kuisa mwenje zvishoma kumberi mukati kubva kumucheto - kungave iko iko kwepaneru rekumashure kunowirirana nemadziro, kana kure zvakakwana kubva kumucheto kudzivirira nongedzo yekuona. nema LEDs kubva kwaungave uchiona.
3) Kutanga nekusungirira pakati petambo kusvika pakati pechiratidziro uye shanda nzira yako kumativi echiratidziro. Zvinogona kubatsira kucheka tsvuku yepurasitiki inotsigirwa nepakati nepakati. Unogona kuita izvi nekuidhonza zvinyoro kure nemutsara.
Paunenge uchishandisa iyo inverted-U, 1/2 yeiyo yakazara maLED pane iyo tambo inofanirwa kuve neiyo yakatwasuka chikamu 1/3 kubva kumusoro. Saka, kana iri tambo ye2m, chikamu chakatwasuka chinofanirwa kunge chiri makumi matatu emaLED (30 mita) kuyambuka. Panofanirwa kuve neakasara ~ gumi nemashanu ma LED pasi pese divi. Kana iri tambo yemamita matatu, panofanirwa kuve nemakumi mana neshanu maLED akatwasanuka maLED uye makumi maviri nemaviri maLED pasi perimwe divi.
ZveTV iri pachigadziko, mwenje wekusarudzika unowanzoiswa pa1 / 3 mucherechedzo nekuti haudi kunyatsoisa tambo yeTV, chero epakati chiteshi masipika kana mabara ezwi, kana mamwe ma tzotchkes anogona kunge achigara paTV koni. .
Kana chiratidziro chako chiine zviyero zvisina kuenzana kumashure (kureva iyo LG kana Panasonic OLED "humps,") zvirinani kusiya gap yemhepo uye kutambanudza iwo mukaha ne45 ° kona pane kutevera makwikwi ekuratidzira. (Ndinoziva kuti zvinoita sekunge uyu mufananidzo wakagadzirwa neane makore gumi nemaviri ekuberekwa).
Kana iwe ukatevera makwikwi akaomarara, uko iwo matanda e LED anotarisana kubva kune mumwe nemumwe, unogona kupedzisira uine "fanning" kana kutarisa scalloped pane izvo zvinzvimbo. Izvo hazvikanganisa kushanda, asi halo haizotaridzika kunge yakatsetseka sezvainogona. Izvi zvakare zvinochengeta iyo halo yakanaka uye inowirirana pamadziro emadziro anokwira. Kana iwe uri kumberi kubva kumadziro, fanning haina kufanana.
Kana iwe uri kuverenga izvi uye zvachose kuvhiringidzika, ndapota usanetseke. Nditaure neni kuburikidza neyedu yekutaura (pasi kurudyi peji ino). Ini ndichave ndichiwedzera mamwe mafoto uye mavhidhiyo mumazuva anouya. Tichawana yako MediaLight Mk2 kumusoro uye kumhanya pasina nguva.